အီမိုဂျီ Launcher ကိုအခမဲ့ Download | APK ကို Android အတွက် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » launchers » ရုပ်ပြောင်တင်ပေးသူ - စတစ်ကာများ & Themes
ရုပ်ပြောင်တင်ပေးသူ - စတစ်ကာများ & Themes APK ကို
အီမိုဂျီတင်ပေးသူနှင့်သင်၏ပင်မမျက်နှာပြင်စိတ်ကြိုက်နှင့်အစဉ်အဆက်လူကြိုက်များရုပ်ပြောင်စတိုင်ပျော်မွေ့! ရုပ်ပြောင် Launcher ကိုယိရုပ်ပြောင် & စတစ်ကာများ, themes များ, HD ကိုနောက်ခံပုံများနှင့်ခေါ်ဆိုခမျက်နှာပြင် themes များပေးပါသည်။ပူပြင်းတဲ့အင်္ဂါရပ်များ
-ချစ်စရာအီမိုဂျီ GIF များ - ဝေမျှမယ်နှင့်သင့်သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူပျော်စရာရှိသည်။
-စတိုင် themes များ - တစ်ခုချင်းစီကိုသင့်ရဲ့ဖုန်းကိုတစ်ဦးအမှတ်တံဆိပ်အသစ်ကရုပ်ပြောင်ကြည့်ပေးပါ, တစ်မူထူးခြားတဲ့ရုပ်ပြောင်မျက်နှာ icon ။
-တင့်တယ်နောက်ခံပုံများ - သင့်ဖုန်းကိုအံ့သြဖွယ်နောက်ခံကိုရယူပါ။
-အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ခေါ်ဆိုသူ၏ screen ကို - ထိုအဝင်ခေါ်ဆိုမှုမျက်နှာပြင်စိတ်ကြိုက်။
-3D အကူးအပြောင်းဆိုးကျိုးများ - ဖန်သားပြင်အကြား switching စဉ်ပြောင်းလဲနေသောသက်ရောက်မှု Cool ။
- Menu ကို: Long-စာနယ်ဇင်းအိမ်မှာ screen ပေါ်မှာလျင်မြန်စွာဘုံ features တွေဝင်ရောက်ဖို့
- မဖတ်ရသေးသည့်သတင်းစကား: မဖတ်ရသေးသောသတင်းစကားနံပါတ်အိုင်ကွန်တံဆိပ်များ
- Junk သန့်စင် & အကြောင်းကြားစာသန့်စင်: အထဲကရှင်းရှင်းလင်းလင်း Junk
- ဘက်ထရီ: ကြာကြာအသက်အဘို့အဘက်ထရီကယ်တင်
- Boost နှင့်တိုးတက်မှု +: ထိရောက်စွာသင့်ရဲ့ဖုန်းကိုအရှိန်မြှင့်
- CPU ကိုအေး: ကျန်းမာအပူချိန်စကေးအတွက်သင့်ရဲ့ဖုန်းကိုစောင့်ရှောက်
- အွန်လိုင်းအားကစားပြိုင်ပွဲ: 20 + H5 ဂိမ်းတွေနဲ့ပျော်စရာရှိသည်!
ကျွန်တော်တို့ကို join နှင့်သင့်ကိုယ်ပိုင် Home Screen ကိုစတိုင်လ်ကိုရှာဖွေ!
ရုပ်ပြောင်တင်ပေးသူ - စတစ်ကာများ & Themes
20.30 ကို MB